Guardiola oo ka fikiraya mustaqbalkiisa kooxda Manchester City kaddib ganaaxii UEFA - Hargeele - Wararka Somali State
Guardiola oo ka fikiraya mustaqbalkiisa kooxda Manchester City kaddib ganaaxii UEFA
(Manchester) 15 Feb 2020. Kooxda Manchester City ayaa tartanka UEFA Champions League laga ganaaxay labada xilli ciyaared ee soo aadan iyo in ay bixiyaan qiimo lacageed dhan €30m, kaddib markii ay jabiyeen sharciga dhaqaale wanaaga.
Pep Guardiola wuxuu ka walwalsan yahay sida ganaaxa kooxda labada sano ah ee Champions League uu u saameyn doono ciyaartoydiisa, laakiin wuxuu doonayaa inuu kooxda sii joogo walibana uu ku faraxsan yahay, sida ay ku warramayaan ilo laga helayo ESPN.
Guardiola ayaa fahansan sababta ciyaartoydiisa ugu waa weyn Manchester City ay u doonayaan in ay kooxda kaga tagaan.
Hadaba, Man City oo laga mamnuucay tartanka UEFA Champions League muddo labo sano ah ayaa kooxdu waxa ay sheegtay inay ka xuntahay ganaaxa, balse aysan la yaabin go’aanka waxayna ku tilmaameen in dhibaato loo geysanayo ay tahay.
Sidoo kale qoraalka Falcelinta oo lagu daabacay Website-ka City xalayto ayaa lagu sheegay in ay kooxda ay qaadan doonto racfaan.
Si kastaba ha noqotee, Pep Guardiola ayaa Man City qeyb ka ah tan iyo sanadkii 2016, isagoo kula guuleystay 2 horyaalka Preimer Leagea, hal FA Cup, 2 ELF Cup iyo laba jeer Community Shield waana sanadihii 2018 iyo 2019.
African Union elects Paul Kagame as chair-person to lead African Agenda 2063
Kooxda Chelsea oo bartilmaameedsanaysa saddex ciyaaryahan suuqa xagaaga & Lampard oo dhisme weyn la damacsan Blues
Valverde oo ka digay halista kaga imaan karta kooxda Eibar ka hor kulanka barri ee horyaalka La Liga